"Mpako 7": nkọwa, atụmatụ, ntuziaka iji mee ihe - Fatịlaịza - 2019
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-achọ inweta ezigbo owuwe ihe ubi site na akwa ha, ọ dịghịkwa mkpa, nke a bụ obere ebe a na-akpọcha, na poteto na cucumbers kụrụ ya, ma ọ bụ nnukwu ubi ugbo. Ebe ọ bụ na ala akarịala oge, ọ gaghị ekwe omume na-eto eto na-edozi ahụ n'enweghị uwe elu.
Ọ bụ maka nzube a ka e jiri fatịlaịza nkịtị "Gumat + 7 Iodine" mee ihe. Ka anyi leba anya n'uzo ya na akwa anyi.
Ngwa "Gumat + 7 iodine": ntụziaka
Mkpụrụ na-esi ísì
Nhazi na ịgbara osisi
Mmekọrịta na ụzọ ndị ọzọ
Nkọwa na ịhapụ ụdị
Ebe ọ bụ na a na-eji ala anyị na-eme atụmatụ kwa afọ, mgbe ụfọdụ ihe ndị a na-akụ na ya, ndị na-anọ n'oge okpomọkụ adịghị enwe ohere ịgbanwe ha. Site n'iji uzo dị otú ahụ eme ihe, ala na-adaba, mkpụrụ na ala ndị a na-ebelata, na-ebelata. Ọ dị mkpa ka ụwa jupụta mineral na ihe ndị na-emepụta ihe. Enwere ike ime nke a na nri aka nri:
etinye nri n'ihu mmiri ịkọ ihe;
tinye aka na mmiri ọgwụ nri.
Ndị na-akwado ala ala na-ahọrọ iji mmiri na-eme ka mmiri dị ala, ma ọ na-esi ike iwepụta nri, ọ dị oke ọnụ, ọ naghị adịrị mfe kesaa ya na nnukwu mpaghara, ọ na-esiri ike ma na-adịghị mma ịrụ ọrụ na ya. Iji nyere ndị ọrụ ugbo aka - ndị na-eto eto na-abịa ala. Kedu ihe ọ bụ na otu a pụrụ isi nyere ala anyị aka.
Ị ma? Mkpụrụ obi abụghị fatịlaịza dị mgbagwoju anya, mana o nwere ihe ndọtị sitere na nsị organic dị n'ụdị bacteria dị mma.
Ihe ndabere maka okike nke "Gumat + 7 Iodine" bụ ọgwụ "Gumat 80". N'otu oge, o nwere ezi aha na ndị na-eto eto. Ihe mejupụtara "Humate + 7 Iodine" dị mma ma gbanwee, ọ dabeere na 85% humic acid. Ojiji ya na ihe ubi na-enye ọ bụghị nanị na humus dị mkpa maka uto na ihe oriri kwesịrị ekwesị, kamakwa ihe nchịkọta ịnweta.
Enwere ihe nchịkọta asaa na nkwadebe a:
Nnukwu uzuzu asaa mere ihe omuma nke ugbo ala na-adabere na mmiri na-abughi nani ihe na-akpali akpali, kamakwa ihe fatịlaịza maka ala. All mineral ndị a dị na ụdị osisi nwere ike ịnweta ngwa ngwa wee banye sel.
Mụta maka iji ezigbo nri nke potassium potassium humate na sodium humate.
Mgbakwunye okpomọkụ nke akwa na-amụba mkpụrụ na nsị mkpụrụ osisi, na-akwalite mmepe nke mgbọrọgwụ siri ike, anaghị ekwe ka osisi ahụ gbakọọ nitrate na ọla arọ dị n'ime sel.
Usoro nke ngwa "Mkpụrụ obi + 7 ayodi" na-egosi na ọgwụ ahụ nwere ike na a ga-eji ya na foliar na foliar nri nke osisi vegetative. Fatịlaịza dị n'ụdị nke gbara ọchịchịrị, mgbakasị rụrụ arụ. Maka ihe dị mma nke na-arụ ọrụ na ihe na-akpali akpali, ọ ga-esi na akọrọ gaa mmiri, ya bụ, na-atụgharị ya na mmiri dịka ntụziaka maka ojiji. Ozugbo mgbochi mmiri na-agba n'ime mmiri mmiri na-enweghị ihe fọdụrụnụ, a pụrụ iji ngwọta mee ihe maka nzube ya. Iodine bụ ihe dị mkpa maka ịnweta tomato, cucumbers, zucchini. Maka oge dị iche iche nke oge na-eto eto nke akwukwo nri ma ọ bụ ọka ndị a kụrụ n'ubi, e nwere ihe dị iche iche nke fertilizing na salic salts, n'ihi na ọ bụ mkpa ka nnukwu osisi ndị toro eto dị mkpa.
Na mkpọ nke ọ bụla na fatịlaịza, a na-enye ndụmọdụ zuru ezu na ọnụego ngwa ngwa nke ihe ọkụkụ na-arụsi ọrụ ike maka ihe ọkụkụ ọ bụla a kọwara n'ụzọ zuru ezu.
Ntụziaka zuru ezu nke ngwọta:
10 g nke mmiri na-ewere kwa 100 g nke ihe akpọrọ kpọnwụrụ akpọnwụ ma gbasie nnọọ ọkụ ruo mgbe agwakọta mkpọmkpọ ebe. Ihe ngwọta nke a bụ isi ihe maka nkwadebe nke 100 lita nke mmiri mmiri fatịlaịza.
Ọ dị mkpa! Mgbe ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-anụ ọkụ n'obi n'inye ihe ndina ha, ọtụtụ mgbe nakwa na ọ dịghị mkpa ka ha na-azụ ha, ebe ha na-agbasoghị iwu ọ bụla. N'ịbụ ndị nwere ọtụtụ fertilizing, osisi ahụ nwere ike ịda mbà n'obi na mmepe ha ma kwụsị oge ha.
Ma ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịkwado ngwakọta obere ngwakọta dị otú ahụ, tụlee otú e si akwadebe obere doses nke fatịlaịza mmiri: 1 g nke fatịlaịza na-etinye n'ime otu ụzọ n'ụzọ atọ nke teaspoon. Ọ dị mkpa iji jupụta n'ụdị ihe a na karama gbara ọchịchịrị ma wụsa lita abụọ. Kwuo ọma. Ọgwụ dị njikere iji. Ihe ngwọta a bara uru maka ịgha mkpụrụ, ifuru osisi, ịkụnye ụlọ n'ime ụlọ na mgbọrọgwụ.
A pụrụ iji acids humic mee ihe maka:
na-eri nri na mkpụrụ osisi ọka tupu ịgha mkpụrụ;
nri nke ihe nile di iche iche nke nkpuru osisi di iche iche na akwukwo uzo abuo;
ịgha mkpụrụ osisi ọkụ izu 2 mgbe ị rute ebe na-adịgide adịgide;
akwukwo nri osisi vegetative.
Ị ma? Humates na acids humic - ọ bụ ihe na-esi na humus ala, itinye uche nke ihe fọdụrụ nke ọrụ dị mkpa nke microorganisms, nke a malitere n'oge nhazi nke ihe ndị dị n'ime ala. A na-eji mmiri sodium na potassium salts nke acids humic.
Ọ bụrụ na ala dị n'ihe ndina gị na-adaba site na ịkụ mkpụrụ nke monoculture, mgbe ahụ, iji humate ga-enyere aka mee ka ọmụmụ ya dịkwuo ukwuu. Maka fatịlaịza a adịghị mkpa ịsụgharị n'ime mmiri mmiri, a na-eji ya dị ka mgbidi mmiri, ngbasa nke ọma n'elu saịtị ahụ chọrọ iji nri. Fatịlaịza dị n'ime 10 g nke ihe dị nnọọ mma iji weghachite ọmụmụ na mita 3 nke ala. Humic acid bụ ihe na-achọsi ike ime ka mmiri ma ọ bụ ụbịa, tupu ịkọ ma ọ bụ ịgbara ala. Ọ naghị anabata ya iji mee fatịlaịza, na-achụsasị ha na mbara igwe nke kpuchiri snow. Mgbe ọ na-emegharị snow, a ga-asacha nri niile si na nri fatịlaịza, n'emeghị ka ọ dị mma.
Obere mkpụrụ nke osisi ihe oriri (tomato, cucumbers, ụtaba, ugu) na-etinye ya na ngwọta nke fatịlaịza "Mkpụrụ obi 7+ iodine" maka awa 48. Oge ịgba oge a nwere ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na a ga-ejiri mmiri mmiri kpuchie osisi ndị a mikpuru n'ime ihe ngwọta.
Mgbe oge a gasịrị, a na-ewepụ mkpụrụ osisi ahụ site na mkpalite stimulator ma tinye ya na ákwà ruru unyi, maka mmụba na-atụ ya ma na-atụgharị ya. N'iji mpempe miri emi abanye n'ime mmiri mmiri, ha nwere ike ịnwụ n'ihi enweghị oxygen. Mkpụrụ ndị dị otú ahụ agaghị ebuli.
Maka mkpụrụ osisi ịgha mkpụrụ, ọ dị gị mkpa igbari 0,5 grams nke ọgwụ ahụ na otu liter mmiri ma maa jijiji ruo mgbe etisasịworo.
Akuku ihe akuku nke ihe ubi akuku (poteto, carrots, Jerusalemichochochok) emere otutu ozo. Ozugbo tupu akuku (2-4 awa), a na-etinye ihe ndị dị otú ahụ na-akụ na ihe ngwọta nke mmiri acid.
Ndị na-eme ka tomato na-eto eto na-eto eto na-emepụta ihe kariri 25%, ma e jiri ya tụnyere ebe a na-ejighị ya.
Maka preplant nhazi poteto, 5 g nke humate na 10 lita mmiri ga-diluted ruo kpamkpam etisasịwo.
Ọ dị mkpa! Ọgwụ "HUMATE + 7 IODINE" anaghị enwe ihe niile dị mkpa maka uto na mkpụrụ osisi nke ubi na ubi. Iji acids humic dị mkpa ka ị gbakwunye ihe dị na ịnweta. Maka ihe eji eme atụmatụ, ọ dị mkpa iji humic, nitrogen, na mgbakwunye ịnweta ịnweta dị mkpa.
Maka akwukwo nri, "Gumat + 7 Iodine" fatịlaịza na-enyere aka iwusi mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na ike, oke azuokokoosisi maka ihe dị mkpa na nke siri ike nke osisi. Ntuziaka maka ọgwụ ahụ gosipụtara na otú e kwesịrị isi tụgharịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na oge ole ka oge na-aga mmiri mmiri.
Nri seedlings amalite izu 2 mgbe loops nke mbụ si n'ala. Enwere ike ime usoro a kwa ụbọchị iri na anọ, mgbe ị na-akwadebe ihe ngwọta ahụ, na-agbaso usoro onyonyo a gosipụtara na mkpọ maka ojiji. Fatịlaịza "Gumat + 7" bụ nanị uru, ma ọ bụrụ na ntụziaka maka iji ngwọta na-agbaso kpamkpam, ọ gaghị ekwe ha omume imerụ anụ ụlọ ahụ. Uzo acids humic bara uru nye ndi na eto eto na ndi toro eto n'ogo obula nke oge na-eto eto. Ị nwere ike ịme nri oriri: ozugbo n'okpuru mgbọrọgwụ na-eto eto site na ogbugba mmiri n'ubi (mgbe ị kwadebere ihe ngwọta dịka iwu), ma ọ bụ site na ịpịnye mgbakwasa n'elu mpempe akwụkwọ ahụ.
Acid acho bụ nke na-abaghị ala, ha dị iche iche dị na klas 4, mgbe ha na-eji ya, ọ dịghị mkpa iji ngwá nchedo, uwe na uwe elu.
Acid acids adighi agwakota n'ime ala, ha adighi ize ndu nye umu ohia, osisi na nnunu.
Ọ dị mkpa! N'agbanyeghị nchekwa ya, nkwenye maka iji ọgwụ eme ihe gosiri na ọgwụgwọ ikpeazụ nke osisi vegetative kwesịrị ịbụ ụbọchị 14-21 tupu owuwe ihe ubi amalite.
Nyocha ndị bara uru egosila na iji mgbu na ihe ndị ọzọ bara uru (ọgwụ pesticides, insecticides) na-enye nsonaazụ magburu onwe ya na nchekwa dị ukwuu n'ihe onwunwe mmadụ na ihe onwunwe. Ọnụ ọgụgụ nke ọgwụgwọ e mere (ya na ngwakọta mix mix) na-ebelata ọtụtụ ugboro, na mkpụrụ osisi toro eto mkpụrụ akụkụ nitrate tụfuru. Nitrogen na potash Mmeju nwere ike agwakọta na tank mixtures na humic asịd.
Ị ma? A ghaghị iwepu nri fatịlaịza site na fertilizing na nkwonkwo na mmiri, ebe ọ bụ na ogige ndị a na-enweghị ike inweta dị ka ihe si na ya pụta. A na-ewebata ha n'ime ala iche iche site na ibe ha.
HUMAT nọgidere na-arụ ọrụ niile bara uru ruo afọ atọ site na ụbọchị a ga-enye ya. Ọ bụrụ na mgbe dilution nke isi mgbọrọgwụ (100 g kwa 10 l nke mmiri) enweghi ike itinye uche na onye na-elekọta ubi, wee wụsa ya n'ime ite ma ọ bụ karama nke iko gbara ọchịchịrị, ị nwere ike iji ya maka nri a. Uche dị otú ahụ agaghị adaba uru ya maka ụbọchị 30, mana maka nke a, ọ dị mkpa ichebe akpa ahụ na ebe dị jụụ.
Ụwa na-enye anyị na ụmụ anyị nri, ọ gaghị ekwe omume iburu onye na-eri nri ma n'echeghị echiche, n'enweghị inye ihe ọ bụla. Mgbe ị na-etolite ezigbo owuwe ihe ubi, ịkwesịrị ịmịnye ụwa na-eji ihe onwunwe eme ihe, na-agbakwunye ala na ihe ọkụkụ n'ala.
Atụmatụ nke eji celery maka gout
Nsogbu na gloxinia: gịnị kpatara blacken, akọrọ, ire ere na buds adịghị emeghe?
Ihe na-adọrọ adọrọ, nke dị ụtọ na nke ọma nke broccoli - ntụziaka maka oven
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu esi etinye fatịlaịza "Gumat 7"?